Q के पछि पेरिकार्डिटिसको बिकास हुन्छ ?
अधिकांश अवस्थाहरुमा पेरिकार्डिटिसको कारण अज्ञात नै हुन्छ । केहि अवस्थाहरुमा यो भाइरल संक्रमणको कारण हुनसक्छ वा मुख्य ह्रदयघात आक्रमणपछि हुन सक्छ । अन्य कारणहरुमा एक थरी छालाको रोग वा लुपुस, रिमाटोइड अर्थ्रिस, मृगौलाको रोग, मुटुको क्षेत्रमा चोट, रगत पातलो हुने औषधिहरु जस्ता चिकित्साहरुको अन्य असरहरु वा साईड ईफेक्ट पर्दछन् ।
Q तपाईं सपनामा विर्य स्खलन हुँदा कति उमेरको हुनुहुन्थ्यो ?
सपनामा विर्य स्खलन हुने प्रक्रियालाई वयस्क वा शुरुवातका जवान वयस्क वर्षको समयमा राती सुतेको बेलामा विर्य स्खलन हुनु वा नोक्टुरल उत्सर्जनको रुपमा भनिन्छ तर तिनीहरु यौवन चरणमा पुगेपछि जुनसुकै बेलामा शुरु हुनसक्छ । पुरुषहरुलाई यौवन १५-१७ को उमेरसम्म पूरा हुन्छ ।
Q मेरो २२ महिनाको छोराको अगाडिको तालु अझै पनि खुल्ला छ । यसको कारण के हुनसक्छ
अधिकांश अवस्थाहरुमा बच्चाहरुको अगाडिको तालु ७-१९ महिनाको बीचमा बन्द हुन्छ । बन्द हुन ढिला हुने कारणहरु अपरिपक्व समयमा जन्म, पाठेघर भित्रको वृद्धिमा बाधा, तलको लक्षण आदि जस्ता हुनसक्छ । म सुझाव दिन्छु कि तपाईंले बच्चालाई कुनै पनि असामान्य अवस्था देखिँदा बाल रोग विशेषज्ञसँग जाँच गराउनु पर्दछ ।